Semalt प्रस्तुत Kantu: परम दृश्य वेब स्क्र्यापि Tool उपकरण
चाहे तपाईं कोडिंग बिना ई-वाणिज्य साइटहरूबाट वित्तीय डाटा वा मूल्य सूचि निकाल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, कान्टु तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो! स्क्र्यापि enthusias उत्साहीहरूका लागि वेब डाटा एक्स्ट्र्याक्शन वेबसाइटहरूबाट मूल्यवान जानकारी प्राप्त गर्ने र स्प्रेडशिटहरू र डाटाबेसहरूमा भण्डारण गर्ने प्रक्रिया हो।
कन्टु सम्पादकले कसरी काम गर्दछ?
कन्टुले स्वचालित रूपमा वेबसाइटहरूको डाटा स्क्र्याप गर्दछ तपाईलाई कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञान बिना नै। कन्टुको साथ, वेब सामग्रीलाई राम्रो संरचित र दस्तावेज डाटामा फर्काउनु गाह्रो कार्य होईन। यो वेब स्क्र्यापिंग उपकरण पोर्टेबल कागजात ढाँचा (पीडीएफ) र भिडियोहरूबाट पाठ निकाल्न व्यापक रूपमा परिचित छ।
झिकिएको डाटा सामान्यतया CSV फाईलहरूको रूपमा बचत हुन्छ वा कन्टुको अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (एपीआई) द्वारा डाटाबेसमा लेखिन्छ। कन्टुले मार्केटरहरूलाई डाटा पहिचान गर्न र हाइलाइट गर्न डाटालाई दृश्यात्मक रूपमा स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ। यो वेब स्क्र्यापि solution समाधान प्रयोग गर्न धेरै सरल छ। Kantu विजार्ड प्रयोग गरेर वेबसाइटबाट डाटा स्क्र्याप गर्न, लक्षित डेटा मार्क गर्न केवल गुलाबी फ्रेमहरू खिच्नुहोस्।
Kantu सम्पादकले त्यसपछि तपाइँको HTML स्रोतबाट जानकारी स्क्र्याप गर्नको लागि अप्टिकल वर्ण पहिचान (OCR) प्रयोग गर्दछ। OCR एक उच्च-गुणवत्ता दृष्टिकोण हो जुन PDF फाईलहरू, भिडियोहरू, र उच्च-गुणवत्ता छविहरू स्क्र्याप गर्न काम गर्दछ।
किन कन्तु सम्पादक छनौट गर्नुहोस्?
कन्टु सम्पादक वेब स्क्र्यापिंगका लागि प्रयोग हुने शीर्ष-श्रेणीकरण उपकरणहरू मध्ये एक हो। यो सम्पादक विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरीन्छ। यहाँ शीर्ष कारणहरू टाढा छन् तपाईंले आफ्नो अर्को वेब स्क्र्यापिंग परियोजनाको लागि कन्टुलाई विचार गर्नुपर्छ।
कन्टु सम्पादक बिल्ट-इन सुविधाहरू जस्तै प्रोग्राम, स्क्रिप्ट, र म्याक्रोहरूको साथ आउँदछ। Kantu को साथ, तपाइँ तपाइँको वेबसाईटबाट यसको डेटा सुविधाहरू अनुकूलन गर्न र तपाइँका आवश्यकताहरू र विनिर्देशहरूको साथ मिलाउन डेटा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै प्रकारका साइटहरूसँग काम गर्दछ
जाभास्क्रिप्ट र एजेक्स प्रयोग गरेर वेबसाइटबाट डाटा स्क्र्याप गर्दा समस्या भइरहेको छ? आराम गर्नुहोस्! कन्न्ट सम्पादक सबै प्रकारका वेबसाइटहरूसँग काम गर्न विकसित गरिएको थियो। कुनै वेबसाइटले फ्ल्याश, जाभा, फ्रेम, वा फ्लेक्स प्रयोग गरिरहेको छ, Kantu विचार गर्न परम वेब स्क्र्यापिंग उपकरण हो।
नयाँ प्रोग्रामिंग भाषा सिक्नु आवश्यक पर्दैन
तपाइँले यो वा त्यो प्रोग्रामिंग भाषा कसरी काम गर्ने भनेर सिक्नुपर्दैन किनकि उपकरण सबै प्रोग्रामिंग भाषासँग एकीकृत हुन्छ।
बिल्ट-इन PDF र OCR सुविधाहरू
तपाइँको जानकारीको लागि, कन्टु सम्पादक मात्र वेब डाटा एक्स्ट्र्यासन उपकरण हो जुन भित्र निर्मित OCR सुविधाहरू समावेश गर्दछ। कन्तुको साथ, भिडियोहरू र पीडीएफबाट डाटा निकाल्नु भनेको भिडियो गेम खेल्नु जत्तिकै हो।
कन्टु प्रयोग गर्ने तरिकाहरू
मनिटर अर्डर स्थिति - ई-व्यापार पोर्टलको प्रगति निगरानीको लागि कन्तु वेब स्क्र्यापिंग उपकरण प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईंसँग एक अनलाइन स्टोर छ भने, कन्तुले तपाईंलाई बनाइएको अर्डरहरू र अनुप्रयोग विवरणहरूको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ;
विभिन्न उत्पादनहरूको मूल्य जाँच र जाँच गर्नुहोस्;
शेयर विनिमय दरको साथ प्रणालीहरू अपडेट गर्नुहोस्;
स्प्रेडशिटमा डाटा डाउनलोड र बचत गर्दै;
OCR को प्रयोग गरेर उपयोगी जानकारी स्क्र्याप गर्नुहोस्;
प्रतिस्पर्धी को स्तर निर्धारण;
कन्टु एक उपयोगी वेब- स्क्र्यापि tool उपकरण हो जुन वेबसाइटबाट डाटालाई स्क्र्याप गर्दछ र स्प्रिडशिटहरू र CSV फाईलहरूमा भण्डारण गर्दछ। यदि तपाईंको अर्को ठूलो परियोजना पीडीएफ कागजातहरू र भिडियोहरूको स्क्र्यापिंगको साथ जडित छ भने कन्न्टु वेब स्क्र्यापि considered विचार गर्न लायकको छ।